ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု — Steemit
ယခုကြှနျုပျတို့ (နာဆာ, 2016) ရှိခြင်းကြောင့်အတိတ်ကာလ 1300 နှစ်များတွင်ကမ္ဘာမြေထိုကဲ့သို့သောပူနွေးလာမှုလမ်းကြောင်းသစ်တွေ့ကြုံမရှိသေးပါဘူး။ တကယ်တော့ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသအဖွဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပူချိန် Pre-စက်မှုဇုန်အဆင့်ဆင့်အထက် 1.2C သည်နှင့်တတန်းအတွက်နှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့, ကစံချိန် (Carrington, 2016) ရက်နေ့တွင်အပူဆုံးနှစ်ကဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုဖော်ပြထားခဲ့သည်။ သိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏မျက်နှာသာအတွက်လွှမ်းမိုးသောပုံရသည်သော်လည်းထိုကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုတစ် hoax သို့မဟုတ်မမျက်မြင်လက်တွေ့စစ်ဆေးအတည်ပြုကြောင်းယုံကြည်သူအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များ, အဘို့, ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာဂြိုလ်၏အနာဂတ်ရှယ်ယာမှာဖြစ်ပြီး, ကြှနျုပျတို့သညျဤအရေးပါသောအချိန်အတွက်ဘာလုပ်သင့်ပြီးခဲ့သည့်အရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးဖျက်ဆီးခံရလျက်ရှိသည်ဖြစ်စေမငြင်းခုန်ဖြစ်သကဲ့သို့ဤစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသည်လက်ရှိတွင်ဖြစ်ပျက်သည်မဟုတ်ယုံကြည်သောသူတို့အားအလင်းနိုင်ရန်အတွက်ငါကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အဆင့်ဆင့်မြင့်တက်ကမ္ဘာ့အပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်း, သမုဒ္ဒရာနွေး, ရေခဲစာရွက်များကျုံ့, ကျဆင်းနေအာတိတ်ပင်လယ်ရေခဲ, တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မှအစစ်အမှန်ကြောင်းပြလတံ့သောသက်သေအထောက်အထားကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ် , အစွန်းရောက်အပူချိန်ဖြစ်ရပ်များ, သမုဒ္ဒရာ acidification နှင့်ဆီးနှင်းဖုံးလျော့နည်းသွားသည်။ အလှည့်၌, ငါသည်လည်း counterarguments နှင့်၎င်းတို့၏ချေပချက်ဆှေးနှေးပါမညျ။
တစ်ကမ္ဘာလုံး, ပင်လယ်အဆင့်ဆင့်အနေနဲ့မကြုံစဖူးမှုနှုန်းမှာမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ ပင်လယ်အဆင့်ဆင့်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ပင်လယ်ရေပူနွေးလာမှု (ကပူနွေးလာသည်သည့်အခါရေတိုးချဲ့) နှင့်ထိုကဲ့သို့သောရေခဲမြစ်နှင့်ရေခဲစာရွက်များအဖြစ်မြေယာ-based ရေခဲ၏အရည်ပျော်၏ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များယောဟန်သည်ဘုရားကျောင်းနှင့်နီးလ်ဖြူ၏အဆိုအရဂလိုဘယ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်သည်လွန်ခဲ့သောရာစုအတွင်း 17 စင်တီမီတာ (6.7 လက်မ) မြင့်တက်လာသည်။ ထို့အပွငျ, ဒီနောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်အတွင်းနှုန်းသည်လွန်ခဲ့သောရာစု (ဘုရားကျောင်း & White, 2006) နဲ့နှိုင်းယှဉ်နီးပါးနှစ်ဆဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤရာစုကနေနောက်ဆုံးဖို့ပင်လယ်အဆင့်ဆင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒါ, ကပင်လယ်အဆင့်ဆင့်အနေနဲ့မျှော်လင့်မထားတဲ့အလှည့်-နှင့်အပူချိန်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြင့်တက်တာဖြစ်ကြောင်းဒီနှင့်အတူလုပ်ဖို့အများကြီးရှိကြောင်းသိသာသည်။
အပူချိန်တစ်ဦးကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြင့်တက်ယခုတချို့နှစ်ပေါင်းသိသာလာခဲ့သည်။ T.C. Peterson et.al. , အမေရိကန်မိုးလေဝသလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သတင်းလွှာဖို့အထူးဖြည့်စွက်အဘို့မိမိတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထဲမှာ, ပူနွေးလာမှု၏အများဆုံးစံချိန်များအပြင် 2001 ကနေဖြစ်ပေါ်ပေါ်တွင် 16 အပူနွေးဆုံးအနှစ် 15 နှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့် 35 နှစ်တာကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်တွေ့ 2015 ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးပျမ်းမျှအားအပူချိန် 1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည့် 1880-1899 ပျမ်းမျှအား (TC Peterson 2016, et.al) အထက်ခဲ့ကြသည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုရှင်းလင်းစွာကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုမကြာသေးခင်ကဖြစ်ရပ်ဆန်းကြောင်းပြများနှင့်၎င်း၏လက်ရှိနှုန်းဆက်လက်မယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်စဉ်းစားရပါမည်။
ပူနွေးလာမှုကနေမြင့်တက်ပင်လယ်အဆင့်ဆင့်လိုပဲသမုဒ္ဒရာကိုလည်းနွေးခံရဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ Levitus, et အားဖြင့်ဘူမိရူပသုတေသနအရသိရသည်။ အယ်လ်။ , သမုဒ်ဒရာ 1969 ကတည်းက 0,302 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တစ်ပူနွေးလာမှုသရုပ်ပြသမုဒ္ဒရာ၏ဆိတ် 700 မီတာ (အကြောင်းကို 2300 ပေ) နှင့်တကွ, တိုးပွားလာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအပူစုပ်ယူကြ (Levitus, et ။ al ။ , 2009) ။ တောင်မှသမုဒ္ဒရာ, သိပ္ပံနည်းကျမှတ်တမ်းတင်ရန်လွယ်ကူကြောင်းအရာတစ်ခုခုရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ, ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုသိသာထက်ပိုပါတယ်။
#global #warming #climate
​နွေမှာ ပူတာ မထူးဆန်း​တော့ပါဘူး